Arsenal Oo La Soo Wareegaysa Alexis Sanchez-ka Cusub Ee Dalka Chile - Wargane News
Home Sports Arsenal Oo La Soo Wareegaysa Alexis Sanchez-ka Cusub Ee Dalka Chile
Kooxda Arsenal ayaa isha ku haysa in ay la saxiixato da’yarka sida wayn loo qiimeeyo ee dalka Chile isla markaana lagu magacaabo Sanchez-ka Cusub ee Marcelo Allende. Kooxda Gunners ayaa saddex jeer da’yarkan ku marti qaaday xarunta tababarka kooxdeeda London Colney si ay tijaabo u mariso isla markaana ay u qiimayso xaaladiisa.
Marcelo Allende ayaa jimcihii ay da’diisu noqotay 18 sano jir wuxuuna taas oo la micno ah in sharciga horyaalka Premier leaque-gu uu hadda ogol yahay in Arsenal ay heshiis rasmi ah oo xirfadlenimo ah ka saxiixan karto Marcelo Allende si ay meesha uga saarto kooxaha kale ee xidigan doonaya.
Allende ayaa waayihiisa ciyaareed ka bilaabay kooxdii ugu horeysay ee uu Sanchez u ciyaaray oo lagu magacaabo Cobreloa, waxaana lagu arkay Emirates Stadium bishii October ee sannadkii hore.Laakiin waxa ay u muuqataa in raga Arsenal u qaabilsan suuqa kala iibsiga inay si aad ah u xiiseynayaan horumarka uu sameynayo xiddigaan farsamada leh ka dib markii ay ku marti qaadeen tijaabo kale.
Allende ayaa ka tagay Cobreloa sannadkii hore ka dib markii uu wakiilkiisa u soo dhameeyay heshiis uu ugu biirayo kooxda heerka labaad ee Chile ee lagu magacaabo Deportes Santa Cruz. Waxaa tayadiisa markii ugu horeysay la wada arkay markii loo magacaabay kabtanka Chile sannadii 2015 ee xulka da’dooda ka hooseysa 15 sanno ee Koobka Adduunka ka qeybgalayay isagoo xulkiisa gaarsiiyay wareega 16ka.
Kooxdii uu Allende ka soo baxay ee Cobreloa waxa ay sidoo kale soo saartay xiddigii hore ee Napoli iyo QPR Eduardo Vargas. Laakiin Arsenal ayaa ku dhaw in ay Marcelo Allende heshiis ka saxiixato isaga oo ka mid ah ciyaartoyda mustaqbalka wayn ku yeelan kara kubbada cagta.